हाम्रो टीम - स्मार्टमे
डोम » हाम्रो टीम
मुख्य सफाई कर्मचारी। उनी हुन् जसले कार्य सूचीहरू, घटना क्यालेन्डरहरू निर्माण गर्दछन् र सम्पूर्ण सम्पादकीय टीमको समन्वय गर्दछ, र निर्माताहरूसँग कुरा गर्छन्। तपाईं हाम्रो च्यानलमा देख्न सक्नुहुने सबै चलचित्रहरूका लागि मज्जा पनि जिम्मेवार छ! उसलाई मनपर्‍यो र सम्पादन गर्नुहोस् 🙂 के तपाईंलाई पनि फोटोहरू मन पराउछ इन्स्टाग्राम र पिनरेस्टमा? यो पनि उनको हो। ऊ मनपराउँछ जब सबै कुरा व्यवस्थित गरिएको छ, जसले हामीलाई स्मार्टको अराजकतामाथि विजय प्राप्त गर्न दृढतापूर्वक मद्दत गर्दछ। एक भावुक यात्री र degrees० डिग्री भन्दा माथि तापक्रमको फ्यान। महिला अर्केस्ट्रा!
स्मार्टमीमा अहिले सम्मको सबैभन्दा सकारात्मक पागल व्यक्ति। ऊ बुझ्दछ र सामाजिक मिडिया लाई मन पर्छ, र ती मा राम्रोसँग नेभिगेट गर्न सक्षम छ। उसले इन्स्टाग्राम र पिन्टरेस्टको निरीक्षण गर्दछ। यसको लागि धन्यवाद, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि सुन्दर प्रविधि कसरी हुन सक्छ र हाम्रो काम भान्साबाट कस्तो देखिन्छ। यो बिना स्मार्ट स्मार्ट यति रंगीन हुने छैन। थप रूपमा, उसले हाम्रो युट्युब भिडियोहरूको लागि उपशीर्षकहरू सिर्जना गर्दछ र समाचार लेख्छ। एक महिला अर्केस्ट्रा!
नयाँ प्रविधिहरूको साथ मोहित, जसको विचारहरू कहिले अन्त हुँदैनन्! ऊ लगातार परीक्षण गर्नका लागि नयाँ उपकरणहरू पत्ता लगाउँदछ, स्मार्ट समाधान डिजाइन गर्दछ र आफैंमा बनाउँछ। एक अर्केस्ट्रा मानिस जो पनि धेरै राम्रो नृत्य गर्दछ! PS उनले चिनियाँ अलार्म घडीसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाए, त्यसैले आदर 😉
एक पोलिश फिलॉलोजिष्ट जसले हाम्रो जीवन बचाउँछ! यसबाट कुनै टाइपो लुकाउन सकिदैन, र वेबसाइटमा प्रत्येक वाक्यले यसको कठोर परीक्षा पास गर्नुपर्दछ। ऊ पहाडहरूमा यात्रा गर्न र पैदल यात्रा गर्न मन पराउँदछ।
तिनीहरू भन्छन् कि डेनियलले आफ्नो साहसिक कार्यदलको नयाँ टेक्नोलोजीमा शुरू गरे र त्यहाँ केही कुरा देखिन्छ। :16:०० बिहान सम्म, एक सम्मानित प्रोग्रामर, एक सम्पादक द्वारा पछ्याई, स्मार्ट भएको नाटक गर्ने सबैसँग निर्दयी। उनलाई ठुलो र सानो यात्रा मन पर्छ।
साधारण अर्थमा। Szymon हाम्रो वेबसाइट को पूरा बैकएन्ड को लागी जिम्मेदार छ। जब केहि काम गर्दैन, उसलाई थाहा छ किन र त्यसले यसलाई सच्याउन सक्छ! उसले सुनिश्चित गर्दछ कि वेबसाइट सुरक्षित छिटो छ र यसले तपाईलाई नयाँ उत्पादोंका साथ सँधै आश्चर्यचकित गर्दछ। रनमेगेड्स र बोर्ड खेलहरूमा भाग लिन्छ। ऊ मनको शान्ति चाहन्छ।
एक सकारात्मक व्यक्ति जसले एक भन्दा बढि गोप्य कुरा लुकाउँछ - उसलाई Google होम र यससँग जोड्न सकिने सबै कुरा मनपर्छ। ऊ आफ्नो विचार व्यक्त गर्न डराउँदैन। यसको लक्ष्य एक स्मार्ट घर डिजाइन गर्नु हो जुन यो देखिने छैन। म दुबै स्मार्ट होम उत्पादनहरू र क्यामेरा समीक्षा गर्न पाउँदा खुसी छु, जस्तै कार क्यामेरा।
जोश र पेशाबाट पत्रकार, जोश द्वारा स्तम्भकार। पावे वर्षौंको लागि सम्पादक थिए, र इतिहास बचपनदेखि नै उनको उत्कट आकर्षण हो। वास्तविकता मा उहाँको उपयुक्त तर हास्यास्पद परिप्रेक्ष्य धेरै हल्का स्तम्भहरु को रूप मा हस्तान्तरण गरिएको छ। प्राविधिक, तर होईन मात्र, पाववेले हरेक आइतवार स्मार्टमेमा आफ्ना विचारहरू साझेदारी गर्ने छन्।
स्मार्ट आमा 😉 उनी तीन cuties को आमा हुन्। उनी आफ्नो परिवारसँग बिताएको समयको कदर गर्दछन्, त्यसैले उहाँ जीवनलाई सजिलो बनाउन स्मार्ट ग्याजेटहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ। सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न उनले सयौं उपकरणको परीक्षण गर्‍यो। स्मार्टमेमा, ऊ जवान र थोरै उमेरका आमा बुबालाई मदत गर्न खुसी हुनेछ! बच्चाहरू र स्मार्टमीमा बिताएको समय बाहेक, उहाँ क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ 😉
स्मार्टमेको ठूलो खोज। ऊ ठूलो गीति लेख्छ र सधैं टाउकोमा नेल हिट गर्दछ। उसले स्मार्ट उपकरणहरूको पूर्ण भिन्न कोणबाट मूल्या can्कन गर्न सक्दछ र सबै चीजमा ताजा परिप्रेक्ष्य हुन्छ। तपाईं सधैं उनको समाचार रोचक पाउनुहुनेछ र हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईं तिनीहरूलाई ठूलो आनन्दको साथ पढ्नुहुनेछ! र त्यो मात्र सुरुवात हो। यसले हामीलाई कति चोटि छक्क पार्छ? हामी आफैंलाई पर्ख्न सक्दैनौं!
इलेक्ट्रोनिक्स उसको रगतमा छ! उनी गृह सम्पादक क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्मार्टमीमा एक सम्पादक र डिजाइनर हुन्। ऊ प्रायः समाधानहरू आफैं निर्माण गर्न र स्मार्ट घरको लागि आफ्नो उत्कटता विकास गर्न रुचाउँछ। उसलाई आफ्नो खाली समयमा फोटो खिच्न मन पर्छ र हामी तिनीहरूलाई पोस्ट गर्न मनपराउँदछौं
कालो घोडा स्मार्टमे। अनियाले स्मार्टमे बनायो। उनले वेबसाइटमा जे देख्छन् निर्माण गरिन्, त्यसैले ग्राफिक डिजाइन, डिजाईनका लागि - लोगोबाट फन्टमा सबै कुरा। काजाकी जस्तै उनी पनि एक एक गरी हिमाल चढ्न मन पराउँछन्। एनियाले शानदार आइसक्रिम पनि बनाउँदछ - हामी विशेष गरी कुकीहरू सिफारिस गर्छौं!
हामीमध्ये अधिकांशको रगमा रगत छ, तर त्यहाँ बिजुलीले भरिएको छ। त्यो हो रम्मीको बारेमा। दिनमा एक अनुकरणीय बुबा, तर जब घाम अस्ताउँदछ, उसले फिबारो उपकरण बाहिर निकाल्छ र उनीहरूसँग के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छ! डिजाईनर र स्मार्टमीको सम्पादक
दिनको एक सम्माननीय इन्स्पेक्टर, र रातमा हिमालहरूको मानिस। स्मार्टमीमा, उहाँ फोटो / भिडियो / अडियो समीक्षाका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र भिडियो र फोटोहरू सह-सिर्जना गर्दछ जुन तपाईं हाम्रो लोगोको साथ देख्नुहुनेछ। उनले एन्डिज, टाट्रा माउन्टेन र कमसेकम meters००० मिटर अग्लो सबै चीजहरूको चुचुरोमा आफ्नो फोटोग्राफी र फिल्म पेशा प्राप्त गरे। ऊ स्कोडा मनपराउँदछ (उसको पहिल्यै दुई थियो, र मीटर अझै पिटेको छ)।
तपाईंको सम्पूर्ण विश्व - स्मार्ट
तपाईंसँग प्रश्नहरू छन्
हामीलाई लेख्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं!